Muuji xogta QGIS ee Google Earth - Geofumadas
Oktoobar, 2014 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, qgis
GEarthView waa furaha lagama maarmaanka u ah oo kuu ogolaanaya inaad sameyso aragti la isku duubo oo ah isku-keenidda Quantum GIS ee Google Earth.
Sida loo rakibo plugin
Si aad u rakibto, waa inaad dooratid: Ku-dariiqyada> Ku-dari macruufka iyo raadinta, sida ku cad muuqaalka.
Marka fiilada la rakibo, waxaa lagu arki karaa qalabkan.
Sida loo xalliyo aragtida Google Earth
Mar haddii lagu rakibay shey-kayd, haddii aan rabno inaan tusno hawlgalkan, xulashada «GEarthView» ayaa la xushay. Google Earth waa in la rakibo, in kasta oo uusan u baahnayn in la bilaabo.
Sidaa darteed waxaan leenahay lakabka qaabka wms, ee Google Eath.
Adeeggu wuxuu u muuqdaa mid sawir leh, laakiin leh ikhtiyaarka lagu muujinayo xogta marka la riixayo, iyo sidoo kale xakamaynta.
Waa mid xiiso leh, in alaab-hawleedka la tago, sida daahfurnaanta, amarrada layers, iwm.
Fiidiyowga waxaad arki kartaa qaliinka.
Post Previous«Previous Awoodda Infographics
Post Next Isku Dayay 2014 FinalkaNext »
7 Jawaab in "Muuji xogta QGIS ee Google Earth"
Salaanta… .ixi furimaha iyo wax walbaa oo qumman, si kastaba ha noqotee markii aan isku dayo inaan dhaqaajiyo aragtida ka dib markaan furay Google Earth, Global Mapper wuxuu furayaa inaan sidoo kale ku rakibay kombuutarka…
Patricia Palacio isagu wuxuu leeyahay:
Aad u fiican boostada. Thanks to Roberto for xogta laga soo iibsaday buugaagta Zope iyo Twisted. Anigu ma dhisi kari waayay ama jilicsanaantey.
Maarso, 2015 at
Isaga oo ka hadlaya curinta fiilada, wuxuu iigu soo diray email this:
1) QGIS muuqaalku wuxuu u guuraa sida ku cad aragtida Google
2) Isku-dubaridaha xariiqa GoogleExth ee isku-duubnida (oo leh Z!) Hadda waxa lagu soo bandhigay barta heerka QGIS
3) QGIS waxay ku dari kartaa dhibcooyinka xogta laga soo qaaday xarunta muuqaalka GoogleEthth
4) GoogleEarth waxay muujinaysaa tixraaca Z ee dhibcaha xarunta muuqaalka
5) GoogleEarth iyo QGIS waxay leeyihiin QrCode dhibic kasta oo la keydiyay
Muxuu yahay xumaha cusub? Kaliya tan: waxaad u baahan tahay inaad rakibto laba maktabado cusub oo cusub:
Wake isagu wuxuu leeyahay:
Hello, plugins ma shaqeeyaan, Waxaan helayaa qalad ah, waxay sheegaysaa inay jabtay, waxaan la shaqeynayaa version 2.4 ee QGis, lagu rakibay Windows 7 ee 64.
Tallaabooyin noocee ah ayaan qaadayaa, wax kale ayaa loo baahan yahay in la rakibo iyo sidee ayaan u sameeyaa?
Blog-ka ayaan ku geliyay fiidiyoow fudud oo muujinaya sida loo rakibo GEarthView 2.o ee MacOSX:
Wixii maktabadaha casriga ah, hadda, waxaad ka heli kartaa labadaba:
Haddii aad ku taal Windows, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibatid gudaha Barnaamijyada / Python / baakadaha barta ee QGIS.
Fadlan, i soo sheeg haddii ay OK tahay.
Xiriirka waxaa ku jira kaliya
Waxay u muuqataa in la xiro:
Marka ugu horeysa ma jirto wax dhibaato ah, laakiin labaad, xiriirka waxaa jira faylasha oo kaliya:
lagu dhisay Windows-2003Server Python Egg 2.4
zope.interface-3.6.0.tar.gz (md5) Isha
zope.interface-3.6.0.win-amd64-py2.6.exe (md5) MS Windows installer
zope.interface-3.6.0.win32-py2.6.exe (md5) MS Windows installer
Xaggee 2.7 version?
Roberto Angeletti isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sii daayay version cusub 2.0 of plugin GEarthView.
Kuwani waa wararka:
Laakiin, way fududahay in la sameeyo, faa iidooyinkuna waa badan yihiin
PS: Waan jeclahay qoraalkan 🙂 Maxaad ugu cusboonaysiin weyday GEarthView 2?